Sidee ayaan u soo kaban karto, xogta laga drive dhintay adag? Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo, si ay u soo kabsadaan dhammaan xogta ka drive dhintay adag, oo ay ku jiraan nidaamka qalliinka files. Read More >>
Windows 7 aan kabaha doonaa? Sida ugu fiican si aad u hesho Windows 7 disk ah boot xirfad, kuwaas oo gebi ahaanba ka saari kara dhibaatooyinka loading aad. Read More >>
Haddii aan files khaanada Downlaods, aad karto nuqul fudud oo paste content u dhexeeya drives USB. Laakiin si ay u USB ah khaanada Downlaods, aadan sameyn karin sida tan. Hubi in u leedahay Hanuuniye. Read More >>
In dhibaato qabo formatted USB drive si qalad ah ama si qalad ah? Your're meel sax ah! Maqaalkani waxa uu ka hadlayaa oo ku saabsan sida loo unformat USB ah. Read More >>
Kac tirtiray ah USB-ul badan files muhiim ah iyo sawiro, sida inuu ka soo kabsado iyaga? Maqaalkani waxa uu idin ​​tusiyo habka ugu fiican ee lagu dhameysto shaqadan. Read More >>
iPhone camera duudduuban oo ku burburtay oo dhan photos waxaa ka lumay? Dago! Maqaalkani waxa uu bixiyaa xalka ugu wanaagsan si uu u xaliyo shil oo duudduuban camera iyo dib sawirrada. Read More >>
Haddii aad u socotid in laguugu beddelo disk convertional oo doonaya in ay u guuraan OS in SSD, buugan aad bixisaa xal Caawo ee si degdeg ah oo ammaan ah socdaalka OS. Read More >>
Ilowday aan password Gmail oo doonaya in ay si deg deg ah u helaan! Ha welwelin. Waxaa jira laba siyaabood oo aan dib ugu heli illowdeen password Gmail. Hubi in wixii faahfaahin ah. Read More >>
Saved xiriiro badan oo aad iPhone? Hadda, maqaalkan aad bixisaa maamulaha iPhone xiriir waxtar leh, kaas oo aad ku dajiyaan karaa / dhoofinta / tirtirto / midowdo xiriirada si fudud. Read More >>
Doonayaa inaan abuuro slideshow la saamaynta ay ka mid yihiin guurka, qoraal, maqal iyo saamaynta gaar ah? Waxaad ku samayn kartaa oo dhan la DVD Slideshow Builder Deluxe si fudud. Read More >>
Ha ogaadaan sida ay u helaan iPhone gurmad faylasha? Wondershare Dr.Fone (Mac) Aad u saamaxaaya in ay helaan gurmad iPhone fudayd. Read More >>
Sida loo soo celiyo files khilaafo? Waa wax iska fudud. Just akhriso hagahaan oo aad soo celin kartaa files kharribmay oo 3 tallaabo fudud. Read More >>
Posted by Selena Lee | 30.11.2015
Si kasta oo ay sameeyaan soo kabashada xogta on camera ah digital? Sure! Iyada oo soo kabasho xogta camera digital, adiga laftaada ayaa si fudud oo dhaqso u samayn karaa iyada oo aan khasaaro tayo leh. Read More >>
Wondershare Data Recovery Barnaamijka waa mid ka mid ah doorashooyinka ugu fiican si aad u soo kabsado xogta ka dib qaab deg deg ah. Waad haysan kartaa akhriska maqaalkan in ay bartaan sida inuu ka soo kabsado xogta deg deg ah formatted. Read More >>
Ever yaabay sida aad u download YouTube inay iPhone, halka Way fududahay in la raadin iyo daawan YouTube videos? Eeg xal u sahlan in aad iPhone soo bixi kartaa YouTube. Read More >>
<Prev 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next